Ciidamo Itoobiyaan Ah Oo Lagu Laayay Wadada isku Xirta Baydhabo iyo Bardaale.
Monday August 06, 2018 - 12:25:43 in Wararka by Super Admin
Wararka naga soo gaaraya gobolka Baay ayaa tilmaamaya in ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah lagu laayey weerar ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale ee wilaayada Baay iyo Bakool.
sawir hore gaadiid ciidanka Itoobiya looga gubay gobolka Bay
Ilo wareedyo deegaanka ah ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyey in barqanimadii maanta qarax xoogan oo noociisu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso lala eegtay Kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo ambabaxay magaalada Baydhabo kuna sii wajahnaa degmada Bardaale oo labaduba ka wada tirsan gobolka Baay.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa Idaacadda Andalus u xaqiijiyey in qarax lagu burburiyey gaari Uraal ah oo ka mid ahaa kolonyada kaas oo ay saarnaayeen tobanaan ciidamo ah.
Waxaa jira khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada Xabashida inkastoo aanan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha rasmiga.
Dadka deegaanka ayaa SomaliMeMo u sheegay in ciidamada Itoobiya ay jareen isgaarsiintii deegaanka, islamarkaana ay ilaa hadda joogaan halkii uu qaraxu ka dhacay.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka howlgala Baay iyo Bakool ayaa bilooyinkii la soo dhaafay culeys xoogan saaray wadada isku xirta Baydhabo iyo Bardaale oo ah midda kaliya ee u furneed ciidamada Itoobiya, una soo mari jirtay sahayda kaga timaado dhanka Itoobiya.